पूर्वराष्ट्रपतिले भने, राष्ट्रपतिका कारण मुलुकमा ग्रहण लाग्यो
पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधान रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिकै कारण मुलुकमा ग्रहण लागेको बताएका उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको विवाद समाधान गर्न सल्लाह दिनुपर्नेमा हतारहतार संसद विघटन गर्नु अनुचित रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे।
संविधान संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिकै कारण मुलुकमा ग्रहण लाग्यो : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नुभएन : पूर्वराष्ट्रपति यादव
राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नुभएन, मुलुकमा ग्रहण लाग्यो : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
लोकतन्त्रमा ग्रहण लागिसक्योः पूर्वराष्ट्रपति यादव
deshsanchar.com1 महिना पहिले
छोटकरी विशेष 13 घण्टा पहिले
भारतमा काेराेना भयावह, एकैदिन लाखाैँ संक्रमित भेटिँदै
छिमेकी देश भारतमा काेराेनाले भयावह रूप लिएकाे छ। नयाँ भेरियन्टकाे भनिएकाे काेराेना भेटिएसँगै भारतमा ठूलाे संख्यामा काेराेना संक्रमित भेटिन थालेका छन्। पछिल्लाे २४ घण्टामा मात्रै भारतमा काेराेनाका १ लाख ६१ हजार काेराेना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै, भारतमा काेराेना खाेपकाे अभाव भएकाे बताइएकाे छ।